Vaovao - Rizobacter dia namoaka fungicide fitsaboana amin'ny voan'ny bio Rizoderma any Arzantina
Fanaraha-maso ny bibikely
Famonoana bibikely ao an-tokantrano
Mpandrindra ny fitomboan'ny zavamaniry
Rizobacter dia namoaka fungicide fitsaboana bio-voa amin'ny Rizoderma any Arzantina
Vao haingana, Rizobacter dia namoaka Rizoderma, biofungicide amin'ny fitsaboana voan'ny soja any Arzantina, izay misy trichoderma harziana izay mifehy ny otrikaretina holatra amin'ny voa sy ny tany.
Matias Gorski, biomanager manerantany ao amin'ny Rizobacter, dia manazava fa Rizoderma dia fungicide fitsaboana voa biolojika novolavolain'ny orinasa miaraka amin'ny INTA (National Institute of Agricultural Technology) any Arzantina, izay hampiasaina miaraka amin'ny tsipika vokatra inculant.
"Ny fampiasana ity vokatra ity alohan'ny famafazana dia miteraka fepetra ahafahan'ny soja mivoatra amin'ny tontolo voajanahary mahavelona sy voaaro, ka hampitombo ny vokatra amin'ny fomba maharitra sy hanatsara ny toetry ny famokarana tany," hoy izy.
Ny fampifangaroana ny tsimokaretina miaraka amin'ny biocides dia iray amin'ireo fitsaboana vaovao indrindra ampiharina amin'ny soja. Fito taona mahery nanaovana fitiliana eny an-kianja sy tambajotram-pitsapana no nampiseho fa ny vokatra dia miasa tsara na tsara kokoa noho ny simika ho an'ny tanjona mitovy. Ankoatra izany, ny bakteria ao amin'ny inoculum dia tena mifanaraka amin'ny sasany amin'ireo karazana fungal ampiasaina amin'ny fomba fitsaboana voa.
Ny iray amin'ireo tombony amin'ity biolojika ity dia ny fampifangaroana fomba fiasa telo, izay manakana ny fiverimberenan'ny aretina lehibe indrindra amin'ny fambolena (fusarium wilt, simulacra, fusarium) ary manakana ny mety hisian'ny fanoherana ny pathogen.
Ity tombony ity dia mahatonga ny vokatra ho safidy stratejika ho an'ny mpanamboatra sy mpanolo-tsaina, satria ny haavon'ny aretina ambany kokoa dia azo tratrarina aorian'ny fampiharana voalohany ny foliicide, ka manatsara ny fahombiazan'ny fampiharana.
Araka ny voalazan'i Rizobacter, Rizoderma dia nahavita tsara tamin'ny fitsapana eny an-kianja sy tao amin'ny tambajotran'ny andrana an'ny orinasa. Maneran-tany, ny 23% amin'ny voan'ny soja dia tsaboina amin'ny iray amin'ireo inoculants novolavolain'i Rizobacter.
“Niara-niasa tamin'ireo mpanamboatra avy amin'ny firenena 48 izahay ary nahazo vokatra tena tsara. Ity fomba fiasa ity dia ahafahantsika mamaly ny fitakian'izy ireo sy mamolavola teknolojia fanokanana izay manan-danja ara-stratejika amin'ny famokarana, ”hoy izy.
4 US$ ny vidin'ny famafazana tsimokaretina isaky ny hektara, raha eo amin'ny 150 dolara ka hatramin'ny 200 dolara amerikana isaky ny hektara ny vidin'ny urea, zezika azota vokarina amin'ny indostria. Nanamarika toy izao i Fermín Mazzini, lehiben’ny Rizobacter Inoculants Arzantina: “Mampiseho izany fa maherin’ny 50% ny fiverenan’ny fampiasam-bola. Ankoatra izany, noho ny fanatsarana ny sakafo ara-tsakafon’ny voly, dia azo ampitomboina mihoatra ny 5% ny vokatra antonony”.
Mba hanomezana fahafaham-po ireo filana famokarana voalaza etsy ambony, ny orinasa dia namolavola inculant izay mahatohitra ny hain-tany sy ny mari-pana ambony, izay afaka miantoka ny fahombiazan'ny fikarakarana voa ao anatin'ny toe-javatra henjana ary mampitombo ny vokatra na dia any amin'ny faritra misy fepetra voafetra aza.
Ny teknolojia inoculation antsoina hoe induction biolojika no teknolojia manavao indrindra an'ny orinasa. Ny induction biolojika dia afaka miteraka famantarana molekiola hampavitrika ny fizotran'ny metabolika amin'ny bakteria sy ny zavamaniry, hampiroborobo ny nodulation aloha kokoa sy mahomby kokoa, ka hampitombo ny fahaiza-manaon'ny azota azota ary hampiroborobo ny fidiran'ny otrikaina ilain'ny legume mba hiroborobo.
“Manome lalao feno amin'ny fahaizantsika manavao izahay mba hanomezana ireo mpamboly vokatra fitsaboana maharitra kokoa. Amin'izao fotoana izao, ny teknolojia ampiharina amin'ny saha dia tsy maintsy mahafeno ny andrasan'ny mpamboly amin'ny vokatra, ary miaro ny fahasalamana sy ny fifandanjana amin'ny tontolon'ny fambolena. ,” hoy i Matías Gorski namarana.
Fotoana fandefasana: Nov-19-2021
Ny orinasa lehibe dia ahitana ny famonoana bibikely ao an-trano, ny famonoana bibikely, ny biby, ny fanaraha-maso ny lalitra, ny API & ny mpanelanelana.